केराको जुसले मोटोपना कम गर्छ, थाहा पाउँनुहोस् कसरी ? | Safal Khabar
केराको जुसले मोटोपना कम गर्छ, थाहा पाउँनुहोस् कसरी ?
विहीबार, २७ फागुन २०७७, १४ : ३३
एजेन्सी । दिनभरको भागदौड र व्यस्तताले भरिएको जिन्दगी र अनियमित खानपानले गर्दा हामी आफ्नो स्वास्थ बिग्रिरहेको हुन्छ । जसको कारणले कैयन शारीरिक समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको हुनसक्छ। यस्तै एक समस्या हो मोटोपना ।
जसबाट बच्नको लागि हामी धेरै खालका उपायहरु पनि अपनाउछौँ । घन्टौँ जीममा पसिना बगाँउछौ र धेरै खालको शारीरिक अभ्यासहरु पनि गछौं तर पनि त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौं ।
हामी तपाईलाई यस्तो ड्रिंकको बारेमा बताउन गइरहेका छौं जसको मद्दतले तपाई सजिलै आफ्नो तौल कम गर्न सक्नुहुनेछ । केरा बाट बनेको यो ड्रिंक धेरै नै फाइदाजनक हुन सक्छ ।